ခါတိုင်းလိုပဲ လအသစ်အစမှာ "စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်လာပြီ" ပရိုမိုးရှင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာလိုက်ပါသည်။
အဲဒါကဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်ပါဝင်ဆင်နွှဲသင့်သလဲ? "စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်လာပြီ" ဆိုတာ ဖောက်သည်များကို ၄င်းတို့၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်အကောင်းဆုံးပြသရန် FBS ကုမ္ပဏီမှကျင်းပပေးသော အရင်ကမရှိခဲ့ဖူးသောပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့အရောင်းအဝယ်သမားများဟာ အောင်မြင်တဲ့အရောင်းအဝယ်သမားများဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည့်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ၄င်းတို့ထဲမှတစ်ခုကတော့ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအရောင်းအဝယ်လုပ်ပါ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်းများရယူပြီး ချမ်းသာမှုကိုတိုးပွားလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ထိုအံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး FBS ကိုသင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်များ ဖြည်ဆည်းခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ ဖော်ပြပါအတိုင်း ရိုးရိုးလေးလုပ်လိုက်ပါ:
1. FBS အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ:https://my.fbs.com/registration
၄. ယခုပို့စ်အောက်ရှိမှတ်ချက်များတွင် သင်၏စိတ်ကူးအိပ်မက်ကိုမျှဝေလိုက်ပါ!